Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. Haasaa gabaabduu gooteenis imimmaanshee harcaastee qeerroofi qarree Oromoo kabachiisuuf lubbuusaanii wareegan galateeffatteetti! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsToltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. Haasaa gabaabduu gooteenis imimmaanshee harcaastee qeerroofi qarree Oromoo kabachiisuuf lubbuusaanii wareegan galateeffatteetti!
Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. Haasaa gabaabduu gooteenis imimmaanshee harcaastee qeerroofi qarree Oromoo kabachiisuuf lubbuusaanii wareegan galateeffatteetti!
Warri loowwan simatu sun hardha eessa jiru.
Taayyee danda’aan faanti.?
#tooltuu tufaa dubartii kabajni maluudhaafi. Oromoon Finfinnee keessa afaan oromoo dubbachuu yeroo hin dandeenyee tti isheen biyya alaatti afaan ofii baratte dhala oromoos barsiisuu irratti qooda guddaa kan Bahachaa turteedha.Mohammednur Guye
— Kichuu (@kichuu24) September 15, 2019
Inni Loon Simachaa bahe sabboontittii korma tana maalif simachuun isa rakkise?
Gowwaan tokko tokko Finfinneefi naannawaasheetti dhalatee guddatee bitaafi mirgaan Oromoon marsamee,ofiis Oromoo tahee, Ani Afaan Oromoo hin beeku jedha .maal malee?
Afaan Amaaraa malee!
Akkas tahuusaa egaa cimina of se’a.
TOLTUU TUFAA intala Oromoo Awustaraaliyaatti dhalattee guddatteedha.Afaan Abbaashee dubbachuurra dabartee “Afaan Oromoo application ” jettee maloota garaagaraa gargaaramtee daa’imman Afaan Oromoo barsiisuuf tolu qopheessuun biyyoota Awuurooppaa baayee irra deemtee Afaan abbaasaanii akka barataniif hojjechaa kan turteefi jirtuudha.
Toltuun fakkeenyummaan ishee waan hedduu nu keessatti uuma.
Walumaagalatti ,irreechaaf gara dachee Oromiyaa Finfinnee dhufteetti baga nagaan dhufte jechuun barbaada .Odaa Habtaamuu Tafa Irraa
LANDED IN FINFINNEE!!!!
I CANT WAIT TO SEE YOU!!!
#OROMOPRIDE #FINFINNEE2019 #AFAANPUBLICATIONS
Finfinnee durii eenyu fa’atu bulchaa ture: